Sina 1.50 1.49 lensa Optical uc mandroso sy fanamboarana | Hongchen
1,50 1,49 lens lens optika uc mandroso
Lalana fohy fohy mahazatra (1.49)
-Fandraisana ADD: -8.00 hatramin'ny +3.00 amin'ny dingana 0.25D.
1.499 S / F FANDROSOANA (ADD + 1.00 ~ + 3.00)
DIA (mm) CURVE NOMINAL CURVE MARINA Miverina ao ambadika CT (mm) ET (mm) SAG (40mm) RX RANGE
Laharana modely: 1.49 Fitaovana fitaratra: résin
Vokatry ny fahitana: mandroso Coating: Uc
Lio-mololo: Mazava Index: 1.49
Diameter: 70 / 12mm, 70 / 14mm, 70 / 17mm Fitaovana: CR39
famolavolana mandroso: famolavolana crossbows RX Progressive: Azo
MOQ: fahakiviana 1 Anaran'ny vokatra: jiro mivaingana mivarotra 1.49 uc
Gravity manokana: 1.32 ABBE Value: 58
Fanoherana ABrasion: 6-8H
Fandefasana sy fonosana
1.49 Lensa Optika UC mandroso
Fanondroana refraktika 1.49
Gravity manokana 1.32
Coating Sarona sy arisotra AR ho an'ny velaran-tarehy roa, fanoherana avo lenta
Safidy loko manarona Maitso / Manga
Làlan-jaza 12mm & 14mm & 17mm
Tanjom-pahefana: SPH: 0.00 ~ + 3.00 0.00 ~ -3.00 ADD: + 1.00 ~ + 3.00
Takelaka data teknika mandroso mandroso
SPH hametraka Φ72mm SPH hametraka Φ72mm
(+) (+) FC talohan 'i jk de (-) (+) FC talohan 'i jk CT
Fandeferana eo alohan'ilay lamosina miverina / miverina ： ± 0.25
ETTOLERANCE ： ± 0.3
FAHEFANA FAHEFANA: S 0.00 / ADD + 1.00 ~ +3.00 ± 0.08D
Inona avy ireo lantiro miandalana?
Ny solomaso mandroso dia tsy misy tariby eyiglass multifocal tsy misy andalana izay mitovy tanteraka amin'ny lantina fahitana tokana. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, solomaso mandroso dia hanampy anao hahita mazava amin'ny lavitra rehetra tsy misy ireo "tsipika bifocal" manelingelina (sy mamaritra taona) izay hita amin'ny bifocal sy trifocal mahazatra.
Ny herin'ireo solomaso mandroso dia miova tsikelikely manomboka amin'ny teboka ka hatramin'ny iray amin'ny haavon'ny masolavitra, manome ny herinaratra mety tsara amin'ny fahitana zavatra mazava tsara amin'ny saika lavitra rehetra.
Ny bifocals kosa dia tsy manana afa-tsy herin'olom-borona roa - ny iray amin'ny fahitana mazava ireo zavatra lavitra ary ny hery faharoa ao amin'ny antsasaky ny solomaso ho an'ny fahitana mazava amin'ny halaviran'ny famakiana voalaza. Ny fihaonana eo amin'ireo faritra misy herinaratra miharihary ireo dia faritan'ny "tsipika bifocal" hita izay manapaka ny afovoan'ilay solomaso.
Ny solomaso mandroso dia multifokalaly tsy misy andalana izay manana fivoarana tsy manam-paharoa hery manome hery ho an'ny vina antonony sy akaiky.
Ny solomaso mandroso indraindray dia antsoina hoe "bifocal tsy misy andalana" satria tsy manana an'io tsipika bifocal hita maso io. Saingy ny lantom-pivoarana mandroso dia manana endrika multifocal mandroso kokoa noho ny bifocals na trifocals.
Ny masom-pandrosoana miandalana (toy ny lantipoitra Varilux) dia mazàna manome fiononana sy fahombiazana tsara indrindra, saingy misy marika maro hafa koa. Ny matihaninao amin'ny fikarakarana ny masonao dia afaka mifanakalo hevitra aminao momba ireo fiasa sy tombontsoa azo avy amin'ireo solomaso mandroso farany ary manampy anao hahita ny masolavitra tsara indrindra ho an'ny zavatra ilainao manokana.
Tombontsoa azo avy amin'ny Lens fandrosoana
Ny solomaso mandroso kosa dia manana herin-tsolika bebe kokoa noho ny bifocal na trifocal, ary misy fiovana miandalana eo amin'ny herinaratra avy amin'ny teboka ka hatramin'ny iray hafa manerana ny solomaso.
Ny famolavolana lantom-pivoarana marolafy dia manome ireto tombony lehibe ireto:
Manome fahitana mazava amin'ny halavirana rehetra (fa tsy amin'ny halavirana fizahana roa na telo fotsiny).
Izy io dia manala ny "sary mitsambikina" manelingelina ateraky ny bifocal sy trifocal. Eto no misy ny zavatra miova tampoka amin'ny mazava sy ny toerana hita rehefa mihetsika manerana ny tsipika hita ireo taratra ireo.
Satria tsy misy "tsipika bifocal" hita maso amin'ny masom-pandrosoana miandalana dia manome anao endrika tanora kokoa noho ny bifocal na trifocal izy ireo. (Io antony io ihany no mety mahatonga ny olona maro ankehitriny manao lantom-pivoarana miohatra amin'ny isan'ny manao bifocal sy trifocals atambatra.)
Teo aloha: 1.50 1.49 solomaso optika lalantsara mandeha matetika
Manaraka: 1.56 Solosaina optika mandroso miandalana
1.59 PC PGX HMC LOTRA OPTIKA
1.56 optika ambony sarychromic fisaka ambony ...
1.61 UV400 HMC HOST INDEX ASP OPTICAL LENS
1.61 SF mandroso fohy HMC Optical ...
1.49 masonkaren-tsary optika uc